होटेल व्यवसायः कस्तो बन्ला त ‘नेपालीरिका’को फ्युजन ब्रान्ड ?
एउटा फरक उद्यमीः मेगा लुब्रिकेन्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक केपी दुलालको प्रेरक कथा
निर्माण सञ्चार, बहसःः उद्यम र उद्यमशीलता । राजनीतिक संक्रमण टुंगिएसँगै नेपालमा अब पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना बढिरहेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ ।
यस्तै सम्भावना देखेर अस्ट्रेलियाको सिल्भर हेरिटेज ग्रुप जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय होटेल चेन कम्पनीहरुले नेपालमा धमाधम पाँच तारे रिसोर्ट र होटेलहरु खोल्न थालेका छन् ।
टाइगर प्यालेस ब्रान्डबाट दर्जन बढी होटेल चलाउने सपना बोकेर विदेशीहरु नेपाल भित्रिएको अवस्थामा स्वदेशी होटेल व्यवसायीको अवस्था चाहिँ कस्तो होला ?
पक्कै पनि राम्रो नहोला । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्नु राम्रो हो तर अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेलहरुले स्वदेशी उद्यमीहरुलाई मिच्ने र थिच्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देख्छन् उद्यमीहरु ।
कृष्णप्रसाद दुलाल यही क्षेत्रमा होमिएका एक सफल उद्यमी हुन् । मेगा लुब्रिकेन्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक दुलाल यतिबेला यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल व्यवसाय भित्राउने तरखरमा छन् । नेपाल र अमेरिका दुई शब्द जोडेर ‘नेपालीरिका’ नामको नयाँ ब्रान्ड भित्राउँदै छन् उनी । यो होटेल स्वदेशमा पनि विदेशीलाई जोड्ने माध्यम बन्ने छ, तर नेपालकै माटोको ब्रान्ड हुने छ ।
मोरङको राजघाट–२ जन्मेका दुलाल ०५८ सालमा पूर्वाञ्चल ल्युब प्रालिका नाउँबाट व्यावसायिक यात्रा गरेका हुन् ।
नाडाको महासचिव, फेडोरेसन अफ नेप्लिज चेम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका सदस्य, राजस्व समिति उपसभापतिको समेत जिम्मेवारीमा रहेका उनको जीवनको आरोह अवरोह साँच्चिकै घतलाग्दो छ । नेपालमा युवा उद्यमी कस्ता सपना देख्छन्, कसरी अघि बढ्न खोजिरहेका छन् भन्नेबारे दुलालसँग निर्माण सञ्चारले गरेको छलफलको अंशः
तपाई आफैंबारे केही बताइदिनु हुन्छ कि !
आफ्नो विगतबारे धेरै बोल्न त म चाहन्नँ । तर, पनि केही घटनाहरु नभनी रहन पनि सकिन्न । म ५ वर्ष र भाइ २ वर्षको थियौं, बुबाले हामीलाई छाडेर स्वर्गे हुनुभयो ।
त्योसँगै मेरो जिन्दगीको संघर्षपूर्ण यात्रा सुरु भयो । उर्लाबारीबाट एसएलसी गरेर महेन्द्र मोरङ र दमक क्याम्पसबाट कमर्समा ब्याचेलरसम्मको शिक्षा हासिल गरेँ । आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा विगतको संघर्ष नै प्यारो छ मेरा लागि ।
जीवनमा पहिलो पटक जागिर खाएको कुनै उदाहरण छ ?
छ नि, रोचक पो छ त । एसएलसी लगत्तै आम्दानी कसरी हुन्छ होला भन्ने सोचले लखेटिरहेको थियो । किनकि घरको जिम्मेवारी सम्हाल्ने म आफैं भएकाले बुबाको अन्त्यपछि व्यावहारिक हुनु मेरो बाध्यता थियो ।
एसएलसी लगत्तै ०४५ साल भदौमा मैले दमकको मेसेनरी पसलमा काम सुरु गरें । माहिनाको २ सय रुपियाँ तलब थियो । यो मेसेनरी पसलमा २ वर्ष काम गरें ।
त्यसपछि महेन्द्रनगरमा ‘वाटर पम्पिङ’ मेसिनको पसलमा काम गरें । यो मेरा लागि व्यावसायकि दुनियाँमा अघि बढ्ने पाइला थियो कि जस्तो यतिबेला लाग्छ ।
त्यसपछि ... ?
त्यसले नै हामीलाई दुई भाइलाई व्यावसायिक दुनियाँमा धकेलिदियो । ०४९ सालबाट हामी दाजुभाइ मिलेर विराटचोकमा ‘सत्कार मेसिनरिङ’ कम्पनी खोल्यौं जहाँबाट हाम्रो व्यावसायिक यात्रा सुरु भएको थियो ।
हामी फैलदै गयौं । त्यसले ०५८ सालमा पूर्वाञ्चल ल्युव प्रालिको रुप लिएको हो । यसैले नै मेगा लुब्रिकेन्ट्ससम्मको यात्रा तय गर्यो ।
तपाईं लुब्रिकेन्ट क्षेत्रमा चाहिँ कसरी आउनुभयो त ?
आर्थिक अभावले गर्दा कमाइ धमाइ खोज्न होमिएको एउटा किशोरले कमाइ गर्ने सिलसिलामै जे जस्तो काम आइपर्यो, त्यही गर्दा गर्दा यहाँ आइपुगियो जस्तो मलाई लाग्छ ।
आफैँले काम गर्दै पढ्दै गर्नुको विकल्प पनि थिएन मलाई । २ सयको जागिर परित्याग गर्दा हामीमा हिम्मत जन्मिसकेको रहेछ ।
२५ लाखमा जग्गा बेचेर थपथाप गरेर १ करोड जति बनाएर हामीले आफ्नै कम्पनी सुरु गरेका थियौं । पहिला हामीले चौधरी ग्रुपको पम्प सेट सप्लाइ गर्याैं ।
हरेक कृषकको घरमा गएर पम्प सेट बिक्री पनि र सेवा पनि दुवै दिन्थ्यौं । झन्डै एक हजार जति पम्प हामीले सेट गरेका थियौँ ।
त्यसपछि कसरी अघि बढ्यो पाइला जब चौधरी ग्रुपले भेटै दिएन ?
त्यसताका हामीले बजारमा धेरै ‘गुडविल’ पाइसकेका थियौं । यसका आधारमा हामीलाई के लाग्यो भने, चौधरी ग्रुपकै सामान सप्लाइ गरेकाले हामीले चौधरी ग्रुपका मेनेजरसँग भेट गर्न चाह्यौं ।
तर, चौधरी ग्रुपको मेनेजरले कहिल्यै समय दिएन । त्यसपश्चात हामीले चौधरी ग्रुपको प्रोडक्ट सेल नगर्ने निर्णय लियौं । किनकि हामीलाई चौधरी ग्रुपले उँभो लाग्ने विश्वासै हुन छाडिसकेको थियो ।
हामी अझै अघि बढ्न चाहन्थ्यौं चौधरी ग्रुप सहयोगी नहुने हामीलाई लाग्यो । त्यसपछि आफैँले कम्पनी खोलेर अघि बढ्ने विचार गरेका हौं ।
के हो त यो पूर्वाञ्चल ल्युब प्रालि ?
पूर्वाञ्चल ल्युव प्रालि एउटा व्यावसायिक ग्रुप हो । यसमा हामी ११ जना सदस्य छौँ । हामीले अहिलेसम्म जति व्यवसाय गरेका छौँ यो सबै पूर्वाञ्चल ल्युब प्रालिकै मातहतबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
यस प्रालिले मेगा लुब्रिकेन्टस, स्टार लुब्रिकेन्टस ब्रान्डका रुपमा उत्पादनहरु बजार लग्ने गर्छ ।
पूर्वाञ्चल ल्युब प्रालि ग्रुपले नै ब्राइटफ्युचर स्कुल, हिमशिखर टेलिभिजन (दमक), हिमशिखर एफ एम (दमक), पेट्रोलपम्प, पूर्वाञ्चल पोलिमर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसैगरी, माेरङकाे विराटचाेकमा ‘नेपालीरिका’ नामको होटल पनि सञ्चालन गर्ने सोच अघि सारेको हो । यसको निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
अचम्मको फ्युजन गर्नु भएको रहेछ, नेपालीरिका कसरी जन्मियो ?
हो सुरु सुरुमा नाम जुरेपछि हामीलाई पनि नौलो नै लागेको थियो । स्वदेश र अमेरिकी ब्रान्डका रुपमा यसलाई अघि बढाउने भएपछि यस्तो अपूर्व नाम छनोट गरिएको हो ।
विशेष गरी पर्यटन उद्योग कसरी अघि बढाउने भन्ने सोचले होटेल खोल्ने र होटेल पनि कस्तो भन्दा ‘युनिक’ त हुनु पर्याे नि हैन र ?
हाम्रो कम्पनीको बजार हिस्सा कस्तो छ त ?
अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभो, यतिबेला नेपाली लुब्रिकेन्ट्सको बजार हिस्सा भनेको ३५ प्रतिशत छ, जुन नेपाली उत्पादनले नै लिएको छ ।
६५ प्रतिशत विदेशी ब्रान्डका उत्पादनले बजार ओगटेको छ ।
तर, नेपाली बजारमा मेगा लुब्रिकेन्ट्स एक्लैको बजार हिस्सा भनेको १० प्रतिशत छ । नेपालका ७ वटै प्रदेशमा हाम्रो बजार विस्तार भइसकेको छ ।
लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन र बिक्रीवितरणमा के कस्तो छ त ?
नेपालमा खुला सीमाका कारण बजार निकै नै अनियन्त्रित छ । गुणस्तरहीन लुब्रिकेन्ट्स बनाएर सस्तोमा बजारमा लैजानेहरु छन् । यसमा सरकारले ध्यानै दिएको पाइन्न ।
भारतबाट कमसल लुब्रिकेन्ट्स भित्रिने भन्सार छली हुने काम ज्यादै नै छ । यसले गर्दा हामीजस्ता नेपाली उत्पादकहरु भने सारै मार्कामा छौँ ।
सरकारसँग केही कुरा गरेनौं हामीले यस बारेमा ?
पटक पटक प्रयत्न गरियो । कस्टम व्यवस्थित गर, हामी कर तिरेर राज्यलाई पनि बनाउनु पर्छ भन्नेहरु चाहिँ कर छल्ने र कालोबजारी गर्नेहरुबाटै पीडित छौं ।
अब चाहिँ एफएनसिसिआइ वा अन्य औद्योगिक संगठित प्रयत्नबाटै सरकारसम्म पुग्ने सोचमा छौं । लुब्रिकेन्ट्सको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत कर सरकारले लिइरहेको छ ।
तर नेपालमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर गर्न चाहने हो भने त सरकारले यहाँभित्रै कम्पनी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिनु पर्ने हो नि ।
त्यसका लागि भन्सार कर १० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने हाम्रो माग छ । तर, सरकारले सुनिरहेको छैन ।
एकाएक होटेलतिर किन लाग्नु भएको त ? कतै लुब्रिकेन्ट्सबाट सन्तुष्टि मिलेन कि !
त्यस्तो केही हैन । लुब्रिकेन्ट्स त निरन्तर अगाडि बढिनै रहन्छ । होटेल खोल्नुमा हाम्रो फरक भिजन रहेको छ । अबको प्रदेश १ मा मोरङको क्षेत्रमा जनसङ्ख्या पनि लाख बढी पुग्नेवाला छ ।
यो क्षेत्रमा पर्यटनको विकास पनि फस्टाउनेवाला छ । त्यसैले यहाँ राम्रो स्तरको होटलको आवश्यकता भइसकेको छ ।
कस्तो हुने छ ‘नेपालीरिका’ ?
‘नेपारिका’ उच्च स्तरीय होटेल हुने छ । २ वर्षमा बनाइसक्ने योजना छ । होटलमा ५० कोठा, २ वटा मिटिङ रुम, स्विमिङ पुल, चिल्ड्रेन पार्कसहितको भव्य निर्माण हुँदैछ ।
तपाईंकै उद्योगबाट काम सिकेका युवाहरु कस्तो कस्तो काम गर्दै छन् त ?
धेरै युवाहरु हामीबाट पनि राम्रो पाठ सिकेर अघि बढिरहेका छन् । मेरै कम्पनीमा ४५ हजार तलबमा काम गर्ने एक भाइले अहिले हामीले जस्तै लुब्रिकेन्ट्स कम्पनी खोल्नुभएको छ ।
यस्तै, धेरै उदाहरण छन् । हामीसँगै जोडिएर डिस्टुब्युट्रको काम गर्ने ४ जनाले कम्पनी खोलिसक्नु भएको छ । यसले आफूलाई पनि खुसी लाग्छ ।
विदेशी रहेका युवा र हाम्रो शैक्षिक प्रणालीका बीचमा कुनै साइनो छ ?
छ नि । यही शिक्षा प्रणालीले हातमा सीप, काँधमा जिम्मेवारी र बजारमा श्रम बेच्ने ल्याकत दिएको भए आज युवा किन बिदेसिने थिए र !
नेपाली युवाहरु स्पेस नपाएर विदेसिएका हुन् ।
नेपाली शैक्षिक प्रणाली राम्रो नहुँदा उपयोगिता नभएर शिक्षित युवा पनि बेरोजगारी बनेका हुन् । त्यसैले हामीमा स्पेसलाइज्ड ज्ञान र हातमा सीप पनि चाहिन्छ ।
अबको विश्वविद्यालयले पनि यस्ता ट्रेनिङ युवामा दिनु पर्छ । युवाहरुले पनि खोला पारि मात्र हरियो घाँस देख्ने, तर नेपालमै केही गर्दा हुन्छ नभन्ठान्ने रोग दिमागमा पाल्नु हुँदैन ।
विदेशी वर्कसपमा काम गर्न सक्छ भने नेपालमा चाहिँ किन लाज मान्ने ? जबकि, त्यही अटो क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत कामदार भारतीय छन् ।
यही काम नेपाली युवाले गर्ने हो भने बिदेसिने क्रममा २० प्रतिशतले कमी आउँछ ।
एउटा भारतीयले महिनाको लाख आइसी आफ्नो देश भित्र्याउँछ, तर हाम्रो नेपाली युवाले खाडीबाट ३० हजार भित्राउने पनि कुन्नि !
घर बनाउने मिस्त्रीदेखि, काठको राम्रो ज्यामी पनि नेपाली युवाले नगर्दा भारतीयहरु नेपाली बजारमा बिकिरहेका छन् । बेरोजगारी भो भनेर नेतालाई गाली गरेर मात्रै अब सुख पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यसैले गर्दा नै हामी पछि परेका पनि हौं नि ।